Dadka qaarkiis waxay u arki karaan inay caddeyn u siiyaan Baaritaanka Dadweynaha khibrad adag ama ay ka welwelaan nidaamka. Waxaan dooneynaa inaan ku taageerno markhaatiyada habka loo bixinayo caddeynta iyadoon loo eegin cidda ay yihiin. Baadhitaanku wuxuu ka soo iibsaday adeegyo khibrad leh xirfadlayaal, madaxbannaan iyo sir qarsoodi ah oo u adeeg bixiyaha khibrada u leh ee Hestia bixiyo. Hestia waxay kugu diyaarin kartaa taageero kala duwan oo luqado kala duwan ah. Si aad u hesho taageerada markhaatiga fadlan la xiriir khadka Taleefanka Bilaashka ah ee Hestia 08081640008 oo ka tag farriin xaqiijinaysa magacaaga iyo luqadda aad jeclaan lahayd inaad taageero ku hesho. Baaritaanka Brook House wuxuu kaloo soosaaray buugyaraha oo ay kujiraan macluumaad dheeri ah oo kusaabsan macnaha markhaati ka noqoshada baaritaanka dadweynaha. Haddii aad jeclaan lahayd nuqul ka mid ah buugyarahan oo ku qoran luqad aan Ingiriis ahayn, fadlan emayl enquiries@brookhouse.staging.wp.dsd.io Ado cadaynaya luqadda aad jeclaan lahayd inaad ku hesho macluumaadkan..